Dagaalkii Kismaayo oo Sii Xoogeystay iyo Dad Magaalada Laga Kaxeystay | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaalkii Kismaayo oo Sii Xoogeystay iyo Dad Magaalada Laga Kaxeystay
Kismaayo (KON)- Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo oo uu dagaalka ka socda ayaa sheegay in dagaalkii sacaado ka hor bilowday uu sii xoogeystay, ayadoo dagaalka ay bar bar socdaan duqeymo xooggan oo dhanka badda iyo cirka ah oo ay xaafadaha kala duwan ee magaalada ay u geysanayaan diiyaaradaha iyo Maraakiibta dagaalka ee Kenya.
Dadka ku nool magaalada Kismaayo ayaa saaka waabarigii ku soo baraarugay boqolaal Ciidamo Kenyaan iyo Soomaali ah oo lagu soo daadiyay xeebta Ceeldhiig ee magaalada Kismaayo halkaasoo uu hadda ka socda dagaal aan waxbo la iskula harin.
Dhawaqa Madaafiicda ay soo tuurayaan Ciidamada Kenya ayaa ku soo dhacay qaar kamid ah xaafada magaalada gaar ahaana xaafada Buuloaamoow oo ka tirsan deegaanka Shaqaalaha ee magaalada Kismaayo, ilaa iyo haddana lama haayo khasaaraha dadka rayidka ah ee madaafiicdaasi.
Dhanka kale Ciidamada Kenya iyo Maleeshiyaadka Shabaab waxaa ay qab qabteen dad aad u badan oo u badan dhalinyaro iyo odayaal lamana garanayo sababta ay dadkaasi u qabsadeen.
Dadka ay dhinacyada dagaalamaya ay kaxeysteen ayaa kor u dhaafaya ilaa 40 qof oo ay ku jiraan dad reer miyi ah.
Keydmedia waxay akhristayaasheeda sharafta leh u ballan qaadeysaa inay daqiiqad kasta u soo tabiso wararkii ugu dambeeyay ee Kismaayo